गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभा के हुँदैछ ? - Abhiyan news
गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभा के हुँदैछ ?
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ११:१३ अभियान न्यूजLeaveaComment on गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभा के हुँदैछ ?
गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सभा रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी परेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला साधारण सभा बोलाइएको भन्दै कम्पनीको ७१ जना शेयरधनीले सीडीओ कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् ।
कम्पनीले आगामी भदौ २३ गतेका लागि काठमाडौंको सोल्टिमोडस्थित एक होटलमा साधारण सभा आह्वान गरेको थियो । सभा सम्मेलन गर्न अहिले पनि नपाइने सरकारी नीति विपरीत संञ्चालकहरुले आफूखुसी निर्णय गर्न साधारण सभा बोलाइएको भन्दै शेयरधनीहरुले विरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय केही सञ्चालक र केही कर्मचारीहरुले मनोमानी ढंगले कामकाज गरिरहेको समेत संस्थापकहरुको आरोप छ । संस्थाका संस्थापकहरु दिलबहादुर राना, टंकबहादुर लिम्बू, ज्ञानबहादुर लिम्बू, टिकाराम सुनुवार, कुमार राईसहित ७१ जना शेयरधनीले उजुरीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन यो सरकारले सक्दैन, एमाले मात्रै सक्छ : केपी ओली
संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
चालू अध्यादेश बजेट विधेयकमार्फत् परिमार्जन गरिने
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार १२:०२ अभियान न्यूज
ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जर गर्न समझदारी
२ असार २०७९, बिहीबार ०६:११ अभियान न्यूज
न्यादी हाइड्रोपावरको आईपिओ बाँडफाँड, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा !
५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०३:५७ अभियान न्यूज